13 ထိုင်ခုံ Embraer အမွေအနှစ် 650 သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာနှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်အစား deadhead ရှေ့ပြေးဗလာခြေထောက်ကိုးကားပေါ်တွင်သင်၏လာမည့်ခရီးသွားဦးတည်ရာသည်ငါ့ကိုအနီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ်ပဏီမြားအတှကျလေယာဉ်လေကြောင်းပြည်ထဲရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု.
အဲဒါကိုစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်မှကြွလာသည့်အခါရွေးချယ်စရာမရှိရှားပါးမှုရှိပါတယ်. တဦးတည်းလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုအတွက် Embraer အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည် 650 ဂျက်လေယာဉ်ပျံ. ဤသည် Embraer အမွေအနှစ် 650 ဂျက်လေယာဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူသောသူသည်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်အဘို့ဤအထူးသဖြင့်လေယာဉ်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆင်းချိုးမည်.
အဆိုပါ Embraer အမွေအနှစ် 650 ဇိမ်ခံနှင့်စတိုင်၏ယုဂျဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသုံးသီးခြား Cabin နှင့်အထိအဘို့အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ် 14 ခရီးသည်. ဤသည်ဂျက်လေယာဉ်သည်၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အများဆုံးလေယာဉ်အာကာသရှိပြီးကြောင့်လည်း credenza နှင့်တကွကြွလာ, အပြည့်အဝဗီရို, နှင့်တစ်ဦး 134 ကုဗခြေလျင်အိမ်သာ (ထို့အပြင်၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အကြီးဆုံး).
အဆိုပါ Embraer အမွေအနှစ် 650 မှာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရှည်ဆုံးအာမခံရှိပါတယ် 10 နှစ်သို့မဟုတ် 10,000 လေယာဉ်ခရီးစဉ်နာရီ. ထို့အပြင်, ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်တက်ကြွဖြစ်ပါသည် 24/7, နှင့်ကျော်ရှိပါတယ် 70 သင်နှင့်သင့်ဂျက်ထံအပ်နှံသောကမ္ဘာအဝှမ်းမှဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ. Embraer အဆင့်ထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ #1 ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအချိန်နှင့်အချိန်မှာထပ်, လက်ရှိတွင်ကျော်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နှင့်ဤလည်းဖြစ်ပါတယ် 1,200 တစ်ဦးစုစုပေါင်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုတွင်ဤဂျက်လေယာဉ်၏ 26 သန်းမိုင်ပျံသန်း.
အနိမျ့ Operating ကုန်ကျစရိတ်များ
Embraer အမွေအနှစ် 650 စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုကမ္ဘာ့နိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်အချို့ရှိအာကာသပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်. ဒီအမြင့်မားတဲ့အသုံးချဂျက်အကျိုးရှိစွာအင်ဂျင်နှင့်လေယာဉ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကြောင့်အများအပြား Two-အခန်းလေယာဉ်သူတို့နှင့်အတူတန်းတူဖြစ်ကြောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုလောင်စာကိုအသုံးပြုသည်. တစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ 3,900 ရေမိုင် (လေးခရီးသည်နှင့်အတူ) လုနီးပါးတစ် payload စွမ်းရည် 5,000 ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုဆောင်အရာရှိသီးသန့်ဒီဂျက်ကိုရွေးချယ်ပါအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည် POUNDS.
မှာ common Sense
သငျသညျခရီးသည်အထူးခံစားမိစေသည်သူတို့ကိုအငြိမ့်ထို့နောက် Embraer လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကျယ်ဝန်းဂျက်လိုအပ်ခဲ့လျှင် အမွေအနှစ် 650 အစိုင်အခဲ option တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာဇိမ်ခံပေါင်းစပ်, သငျသညျလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အပျော်အပါးထိုသို့အသုံးပြုနေသည်ရှိမရှိကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဂျက်လေယာဉ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အနိမ့်သော Operating ကုန်ကျစရိတ်.
Embraer ဂျက် Legacy 650 အချိန်ကျော်စိတ်ဝင်စားမှု:
Embraer လေယာဉ်ပျံ Legacy 650 မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှု
Instagram ကို: Embraer 750 legacy 650 ဂျက်လေယာဉ်ကိုပြည်ထဲရေး
Embraer legacy 650 လေယာဉ်လေကြောင်းဇိမ်ခံကားပြည်ထဲရေးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
အားဖြင့်မျှဝေတစ်ဦးက post ကို WysLuxury JetCharter (@wysluxury) အပေါ် ဒီဇင်ဘာ 10, 2017 တွင် 6:53ညနေ PST
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Milwaukee, ငါ့ကိုအနီး WI လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ